Ọ Dị Ka Ụwa Ò Zuuru M—Egwú, Onye A Ma Ama, na Ego
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Ọ Dị Ka Ụwa Ò Zuuru M”
Akụkọ Stéphane Wallace Turcotte kọrọ
AFỌ A MỤRỤ M: 1962
EBE M SI: Kanada
NDỤ M BIRI: Ebiri m ndụ rụrụ arụ
A mụrụ m na Mọntriọl, bụ́ obodo kacha buo ibu na Kwebek dị na Kanada. Nne na nna anyị zụlitere mụ na ụmụnne m atọ n’ọmarịcha obodo a na-akpọ Rozmọnt. Ha hụrụ anyị n’anya. Anyị niile biri n’udo n’ezinụlọ anyị.
Mgbe m bụ nwata, ihe gbasara Baịbụl na-atọ m ụtọ. M chetara mgbe m dị afọ iri na abụọ, m gụrụ Agba Ọhụrụ nke Baịbụl ebe kọrọ otú Jizọs si bie ndụ n’ụwa. Ihe m gụrụ tọrọ m ezigbo ụtọ. Otú Jizọs si hụ ndị mmadụ n’anya na otú ihe banyere ha si emetụ ya n’obi metụrụ m n’ahụ́, mụ achọọkwa ịdị ka ya. Ma, ka m nọ na-etolite, mụ na ndị na-akpa àgwà ọjọọ malitere ịkpa, mmasị m nwere ịna-eme ka Jizọs ejiri nwayọọ nyụọ ka ọkụ.
Papa m na-afụ ngwá egwú a na-akpọ saxophone. O nyere m ngwá egwú a, meekwa ka ịkụ egwú na-atọ m ụtọ, mụ ejiri ya mere aka ọrụ. Egwú na-atọ m ezigbo ụtọ nke na o gbughị oge mụ amụta ịkpọ ụbọ. Ka oge na-aga, m kpọọrọ ụfọdụ ndị enyi m bido òtù egwú na-akụ egwú rọk, anyị gakwara ọtụtụ ebe kụọ egwú. Ụfọdụ ụlọ ọrụ a ma ama na-emepụta egwú hụrụ otú m si akụ egwú ma gwa m ka ha mee ka egwú m na-ewu ewu. Mụ na otu ụlọ ọrụ ma nke a na-akọ n’imepụta egwú kwekọrịtara ka ha mepụtawara m egwú. Egwú m bịara malite iwu ewu, a na-akpọkwa ya na redio mgbe niile na Kwebek.
Ọ dị ka ụwa ò zuuru m. M bụ nwa okorọbịa aha ya na-ede ude. Egwú m na-akụ na-atọ m ụtọ, na-enyekwa m ezigbo ego. Chi bọọ, m na-aga megaa ahụ́, a na-agba m ajụjụ ọnụ, ndị mmadụ na-ewete ihe ha dị iche iche ka m bịanyere ha aka na ya, m na-agbakwa na tiivi. N’abalị, m na-akụ egwú m, na-agakwa oriri na nkwari. Ka m nwee ike ịna-akụ egwu n’ihu ìgwè mmadụ n’atụghị ụjọ, m bidoro ṅụwa mmanya mgbe m ka na-eto eto, mechaakwa ṅụwa ọgwụ ike. M na-eme otú ọ bụla o si masị m, na-ebikwa ndụ rụrụ arụ.
Ụfọdụ ndị chọwara ịna-eme ka m n’ihi na m yiri onye na-enwe obi ụtọ. Ma, n’ime obi m, ama m na anaghị m enwe obi ụtọ, karịchaa ma naanị m nọrọ. Ike ụwa na-adị agwụ m, mụ ana-echegbukwa onwe m. Ma n’oge ahụ ihe nọ na-agaziri m, ọrịa obiri n’ájá ọcha gburu mmadụ abụọ n’ime ndị na-emepụtara m egwú. O riri m ọnụ. Ọ bụ eziokwu na ịkụ egwú na-atọ m ụtọ, mana ụdị ndụ ya na ya so aga malitere ịsọ m oyi.
N’agbanyeghị na ihe nọ na-agara m nke ọma, ama m na ihe anatụdịghị aga otú o kwesịrị n’ụwa. Gịnị mere mmegbu ji ju ebe niile? M nọ na-eche ihe mere na e nwebeghị ihe Chineke mere banyere ihe na-eme n’ụwa. Ọtụtụ oge, m kpedịrị ekpere rịọ Chineke ka o mee ka m ghọta ihe mere mmegbu ji ju n’ụwa na ihe mere na o nwebeghị ihe o mere maka ya. N’otu oge m kwụsịtụrụ ka m zuru ike n’ebe m gara ilegharị anya, m maliteghachiri ịgụ Baịbụl. Ọ bụ eziokwu na aghọtaghị m ọtụtụ n’ime ihe ndị m gụrụ, ma ihe m gụtara mere ka o doo m anya na ọgwụgwụ ụwa adịla nso.
Ka m na-agụ Baịbụl, m gụtara na o nwere oge Jizọs buru ọnụ abalị iri anọ n’ala ịkpa. (Matiu 4:1, 2) M gwara onwe m na ọ bụrụ na mụ ebuo ọnụ ka Jizọs, Chineke nwekwara ike ime ka m mata onye ọ bụ. N’ihi ya, m kpebiri ụbọchị m ga-ebido. Mgbe ọ fọrọ izu abụọ ka m bido, Ndịàmà Jehova abụọ bịara kụọ aka n’ụlọ m. M gwara ha batawa ka à ga-asị na m na-atụ anya ha kemgbe. Aha otu n’ime ha bụ Jacques. M legidere ya anya ná mkpụrụ anya ma jụọ ya, sị: “Olee otú anyị ga-esi mara ma oge a anyị bi ọ̀ bụ oge ikpeazụ?” O mepere Baịbụl ya ma gụọrọ m 2 Timoti 3:1-5. M jụwaziri ha abụọ ọtụtụ ajụjụ, m jụpụ, mụ ajụchie. Otú ha si jiri Baịbụl zaa m ha otú doro m anya, tọrọ m ezigbo ụtọ. Mgbe mụ na ha kwurịtara ugboro ole na ole ọzọ, m ghọtara na ọ baghịzi uru mụ ibuwe ọnụ ahụ m chọburu ibu.
Mụ na Ndịàmà Jehova malitere ịmụchi Baịbụl anya. M mechara kpụọ isi m n’ihi na ọ dị ogologo, malitekwa ịga ọmụmụ ihe niile ha na-enwe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze dị m nso. Otú ha si anabata m nke ọma ma m gaa ọmụmụ ihe mere ka obi sie m ike na ọ bụ ha na-akụzi eziokwu.
O doro m anya na ọ bụrụ na m chọrọ ịna-eme ihe m na-amụta, m kwesịrị ịgbanwe ụfọdụ ihe ná ndụ m. Ama m na m kwesịrị ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ, kwụsịkwa ndụ rụrụ arụ m na-ebi. M kwesịkwara ịkwụsị iche naanị gbasara onwe m, na-echekwa gbasara ndị ọzọ. Ebe ọ bụ naanị m na-azụ ụmụ m abụọ, m kwesịrị ịna-elekọta ha, na-enyekwara ha aka ka ha na Jehova dịrị ná mma. Ọ bụ ihe ndị a mere m ji kwụsị ịkụ egwú, malitezie ịrụ ọrụ a na-anaghị akwụ m ezigbo ụgwọ n’otu ụlọ ọrụ.
Ọ dịghịrị m mfe ime mgbanwe ndị a niile. M gbara mbọ ka m kwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Mgbe ụfọdụ, ahụ́ na-enye m nsogbu n’ihi ọgwụ ọjọọ ahụ m kwụsịrị ịṅụ, e nwekwara oge ndị m ṅụrụ ya ọzọ. (Ndị Rom 7:19, 21-24) Ihe kacha siere m ike ịkwụsị bụ omume rụrụ arụ. Ọrụ m na-arụ ugbu a na-agwụ m ezigbo ike, ego adịghịkwa ya. Ọ na-ewe m ọnwa atọ iji nweta ego m na-enweta naanị n’awa abụọ m kụrụ egwú.
Ekpere nyeere m aka ime mgbanwe ndị a siiri m ike. Ihe ọzọ nyeere m aka bụ ịgụchi Baịbụl anya. E nwere ụfọdụ amaokwu Baịbụl nyeere m ezigbo aka. Otu n’ime ha bụ 2 Ndị Kọrịnt 7:1. Ebe ahụ gwara Ndị Kraịst ka ha “sachapụ onwe [ha] mmerụ niile nke anụ ahụ́ na nke mmụọ.” Ndị Filipaị 4:13 mekwara ka obi sie m ike na m ga-akwụsili àgwà ọjọọ ndị m na-akpa. Ebe ahụ sịrị: “N’ihe niile, enwere m ike site n’aka onye ahụ nke na-enye m ike.” Jehova Chineke zara ekpere m ma nyere m aka mụ emechaa ghọta ihe Baịbụl na-ekwu ma na-eme ya eme. Nke a mere ka m nyefee Jehova onwe m. (1 Pita 4:1, 2) N’afọ 1997, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
O doro m anya na m gaarala anwụ ma a sị na m ka na-ebi ụdị ndụ ahụ m na-ebi na mbụ. Ma ugbu a, ndụ m na-atọ m ezigbo ụtọ. Jehova ji ọmarịcha nwunye m bụ Elvie gọzie m. Mụ na ya ji oge anyị niile na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl. Ozi anyị na-eje na-eme m ezigbo obi ụtọ. Ekele dịrị Jehova na ọ dọtara m n’ebe ọ nọ.—Jọn 6:44.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ọ Dị Ka Ụwa Ò Zuuru M”
Ọ Dị Ka Ụwa Ò Zuuru M
ijwcl isiokwu 3
Otú Baịbụl Si Zaa M Ajụjụ M Niile Ha Edoo M Anya Tọrọ M Ezigbo Ụtọ